MuseScore: yakakurumbira muchinjika-chikuva mamaki edhita | Linux Vakapindwa muropa
MuseScore inozivikanwa nemimhanzi notation software, yemahara uye yakavhurwa sosi yakapihwa marezenisi pasi peGNU GPL General Veruzhinji License. Ichi chishandiso muchinjikwa-chikuva saka inogona kushandiswa muLinux, Mac OS X uye Microsoft Windows.
Saizvozvo Izvo zvinoshandiswa zvese kugadzirisa ako pachako zvibodzwa, pamwe nekuwana zvibodzwa online kubva kuraibhurari iyo inogona kuwanikwa kana uchipinda munharaunda yemushandisi kutsvaga nekuisa zvibodzwa muchirongwa, pamwe nekutsikisa izvo zvaunoita.
Zvakare iyi app inotibvumidza kuti tione nemumhanzi mimhanzi painoridzwa uye nekudaro kugona kuve nepfungwa iri nani yekutevera kwezvibodzwa.
MuseScore Chaizvoizvo ndeye WYSIWYG mupepeti nerutsigiro ruzere rwekutamba zvibodzwa uye kuunza kunze kwenyika MusicXML uye yakajairwa MIDI mafaera. Iyo ine rutsigiro rwekupopota notation, pamwe nekudhinda kwakananga kubva muchirongwa.
1 Nezve MuseScore
2 Maitiro ekuisa Musescore paLinux?
Iyo purogiramu ine yakachena mushandisi interface, ine yekukurumidza noti yekupinda mukugadzirisa yakafanana neyekukurumidza noti yekupinda inowanikwa mune mamwe emabhizimusi emimhanzi notation zvirongwa, senge Finale naSibelius.
MuseScore yakanyatso nzwisisika uye yakakwana kune avo vari kutanga mune yakasarudzika yezvibodzwa, sezvo zviwanikwa zvacho zvese zvirinyore uye kufambiswa.
Zvakare MuseScore inotsigira isina muganho nhamba yemapatani, anosvika mana manzwi pateni zvakare inotipawo kugona kupinza uye kutumira kunze akawanda mafomati mafomati, kusanganisira pakati peanonyanya kufarirwa midi neMusicXML uye ine yakasanganiswa FluidSynth synthesizer uye sequencer.
Naizvozvowo Tinogona kugadzira zvinyorwa zvePDF, SVG kana PNG, kana neimwe nzira, mimhanzi inogona kutumirwa kuLilyPond ye post-kurongeka, kuunza GuitarPro-mhando mafaera anoshandiswa mumapurogiramu anozivikanwa seGuitar Pro kana Tuxguitar inotsigirwawo.
Unlimited mamaki kureba
Nhamba isingagumi yematanda pahurongwa
Kusvikira kumazwi mana akazvimirira pamushandi
Chikamu uye Template Yokusika Wizard
Otomatiki chikamu kuburitsa uye shanduko
Kudzokorora, kusanganisira segnos, codas, uye kudzokorora kwezviyero
Dynamics, articulations uye zvimwe zvirevo mamaki, iine playback rutsigiro rwevazhinji
Tsika dzemavara mamaki
Jazz notation, inosanganisira lead lead, slash notation, uye "yakanyorwa nemaoko" font yemavara
Oscillation uye zvisina kujairika kutamba
Musanganisi wechiridzwa uye nhanho nhanho
Zvekare mimhanzi notation
Kufambisa pakati pevashandi
Tsika dzakakosha masiginecha
Masitaidhi-anotsanangurwa masisitimu ekunyora
Maitiro ekuisa Musescore paLinux?
Si unoda here kuisa iyi application pane yako system, unogona kuzviita kubva nenzira yakapusa. Kune izvi nisu tichaenda kukutsigira iwe kubva kuSnap kuti uwane chirongwa ichi.
Yedu chete system inofanirwa kuve nerutsigiro rweiyi tekinoroji kuti ikwanise kuisa kunyorera kubva kuSnap.
Zvino chete Tinofanira kuvhura terminal uye titeedzere unotevera kuraira:
Waita kuiswa Izvo zvinodikanwa kuti ubatanidze kune imwe system masisitimu, saka isu tinofanirwa kunyora mirairo inotevera:
Kune rumwe rutivi, Kana iwe uchida kushandisa Flatpak tinogona kuisa iyo application nerubatsiro rweiyi tekinoroji kutaipa unotevera kuraira:
Uye isu tinomhanya kunyorera ne:
Finalmente isu tine sarudzo yekugona kuisa chishandiso ichi kubva kumahofisi epamutemo ezvakawanda zvekugovera.
Para nyaya yevashandisi veDebian, Ubuntu uye chero chinobva pane izvi, isu tinoisa iyo application ne:
Kana iwe uri mushandisi we Arch Linux, Manjaro, Antergos uye chero chinobva pane izvi zvatinoisa ne:
Panguva yeavo vanoshandisa Fedora, CentOS, RHEL kana chero chinobva pane izvi zvatinoisa ne:
Pakupedzisira, ye avo vanovhuraSUSE vashandisi vanoisa ne:
Uye neizvozvo isu tichava tatova nechishandiso chakaiswa mune yedu system yakagadzirira kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » MuseScore - yakakurumbira muchinjika-chikuva mamaki edhita